2 Tantara 33 - Ny Baiboly
2 Tantara toko 33
Manase sy Amòna mpanjakan'i Jodà.
1Roa ambin'ny folo taona Manase fony vao nanjaka, ary dimy amby dimampolo taona no nanjakany tao Jerosalema. 2Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo izy, nanaraka ny fahavetavetan'ny firenena noroahin'ny Tompo teo anoloan'ny zanak'Israely. 3Naoriny indray ny fitoerana avo noravan'i Ezekiasa rainy; nanangana otely ho an'ireo Baala izy; nanao aserah izy, ary niankohoka teo anatrehan'ny tafiky ny lanitra, sy nanompo azy. 4Nanorina otely teo an-tranon'ny Tompo izy, izay nolazain'ny Tompo hoe: Ho ao Jerosalema mandrakizay ny anarako. 5Nanorina otely teo amin'ny kianja roa an-tranon'ny Tompo izy, ho an'ny tafiky ny lanitra rehetra. 6Nampamakiny ny afo tao an-dohasahan'i Bena-Enoma ny zanany. Narahiny avokoa ny fomban'ny fanandroana, ny sikidy, ny fankatoavana, nanendry olona ho mpiantso ny fanahy sy ho mpanao ody izy. 7Ny sarin'ny sampy nataony, dia napetrany tao amin'ny tranon'Andriamanitra izay nolazain'Andriamanitra tamin'i Davida sy Salomona zanany hoe: Eto amin'ity trano ity sy eto Jerosalema izay nofidiko teo amin'ny fokon'Israely rehetra no tiako hametrahana ny anarako mandrakizay. 8Tsy havoakako hiala amin'ny tany notendreko ho an'ny razanareo ny tongotr'Israely, raha mbola tandremany ihany ny manaraka izay rehetra nandidiako azy koa izy, dia araka ny didy aman-dalàna ary fitsipika nomena tamin'ny alalan'i Moizy. 9Ka dia Manase no tonga nampania an'i Jodà mbamin'ny mponina ao Jerosalema, ka nandroso nanao ratsy izy ireo mihoatra noho ireo firenena naringan'ny Tompo, teo anoloan'ny zanak'Israely. 10Niteny tamin'i Manase sy ny vahoakany Iaveh; nefa tsy nasian'izy ireo raharaha akory izany.
11Tamin'izay dia nentin'ny Tompo hamely azy ireo ny lehiben'ny tafiky ny mpanjakan'i Asiria, nosamborin'ireo Manase tamin'ny masom-by, nogiazany tamin'ny gadra varahina roa, dia nentiny nankany Babilona. 12Nony latsaka am-pahoriana izy vao nihanta an'ny Tompo Andriamaniny, nanetry tena lehibe teo anatrehan'Andriamanitry ny razany. 13Dia nangataka taminy izy; dia nety ifonana Iaveh ka nihaino ny fifonany, sy nampody azy ho any Jerosalema amin'ny fanjakany. Dia nihaiky Manase fa Andriamanitra Iaveh.
14Tatý aorian'izany, nanao manda teo ivelan'ny tanànan'i Davida izy, teo andrefana mankany Gihona amin'ny lohasaha hatrany amin'ny vavahadin-Kazandrano hanodidinana an'i Ofela, sady nasondrony ho avo dia avo. Ary nametrahany mpifehy miaramila ny tanàna mimanda rehetra amin'i Jodà. 15Nesoriny tao an-tranon'ny Tompo ny andriamani-kafa, ny sampy, mbamin'ireo otely rehetra naoriny teo an-tendrombohitry ny tranon'ny Tompo, sy tao Jerosalema, ka nariany tany ivelan'ny tanàna. 16Dia naoriny indray ny otelin'ny Tompo, ka nanatitra sorom-pihavanana amam-pisaorana teo izy, ary nandidy an'i Jodà hanompo an'ny Tompo Andriamanitr'Israely. 17Mbola nanao sorona teny amin'ny fitoerana avo ihany ny vahoaka, nefa tsy ho an'iza fa ho an'ny Tompo Andriamaniny.
18Ny asan'i Manase sisa, ny vavaka nataony tamin'Andriamaniny, ny tenin'ireo mpahita niteny taminy tamin'ny anaran'ny Tompo Andriamanitr'Israely, dia efa samy voasoratra ao amin'ny asan'ny mpanjakan'Israely. 19Ny vavaka nataony, ny nihainoan'Andriamanitra an'izany, ny fahotany amam-pahadisoany, ny toerana nanorenany fitoerana avo, sy nananganany aserah aman-tsarin-javatra, talohan'ny nanetreny tena, dia indro fa efa voasoratra ao amin'ny Tenin'i Hozaia. 20Ary nodimandry any amin'ny razany Manase ka nalevina tao an-tranony. Amòna zanany no nanjaka nandimby azy.
21Roa amby roapolo taona Amòna fony vao nanjaka, ary roa taona no nanjakany tao Jerosalema. 22Nanao izay ratsy eo imason'ny Tompo, tahaka ny nataon'i Manase rainy izy, nanao sorona tamin'ny sarin-javatra rehetra nataon-drainy, Amòna, ary nanompo an'ireny. 23Tsy mba nanetry tena teo anatrehan'ny Tompo tahaka ny nataon-drainy anefa izy, fa vao mainka nanota bebe kokoa aza Amòna. 24Niray tetika hamely azy ny mpanompony, dia namono azy ho faty tao an-tranony. 25Fa novonoin'ny vahoaka tamin'ny tany kosa izay rehetra niray tetika hamely an'i Amòna. Dia Josiasa zanany no natsangan'ny vahoaka tamin'ny tany ho mpanjaka hisolo azy. >